Smartify yi "Shazam" yobugcisa kunye nokuchonga imizobo kwiimyuziyam | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Smartify yi «Shazam yoBugcisa» usetyenziso oluchaza imizobo evela kwiimyuziyam kwihlabathi liphela
Shazam ngu enye yezo "magic" zokusebenza ezifakwe zizigidi zabasebenzisi kwihlabathi liphela, kwaye oko kuyasinceda ukuba sichonge ingoma edlalayo. Ngale ndlela sinokuyigcina kwimbali yethu "yokuchonga" okanye sazi kwangoko ukuba imvumi okanye iqela liyidlala phi. Isixhobo esikhulu esisinceda ngamaxesha amaninzi emini kwabo bangabathandi bomculo omncinci.
Ngokusekelwe kwimbono kaShazam, Smartify yinkqubo yobugcisa ekuvumela ukuba uskene umsebenzi wobugcisaChonga igama kunye nomculi kwaye unike ulwazi oluthe kratya malunga nalo. Le app ilungile kwezinye iimyuziyam ezingama-30 ezisasazeke kububanzi nobude beplanethi ukufumana ulwazi ngakumbi kunokuba kuqhele ukwabelwana ngomboniso omnye.
Njengobugcisa obuninzi, umxholo womsebenzi, kule meko yimifanekiso, iyanceda ukuqonda ukuba kutheni kwaye kutheni umbhali okanye umzobi weza kuyenzela yona. Esi sisizathu seqela elingemva kokuSebenza ngokuSebenza kuyo. Uye wayibiza njengeklasi yobugcisa bokufundisa ehamba ngaphezulu kweekhathalogu zobugcisa eziqhelekileyo okanye izikhokelo zeaudiyo zomsindo
Njengalo mhlobo unomdla wobugcisa, le app isebenza ngokugqibeleleyo ukongeza ulwazi oluthe kratya kwezi ndawo esenzela iigalari zeemyuziyam ezithile kwizixeko ezikhulu.
Ngaphandle kokubonelela ngengqondo engaphezulu ngomsebenzi oboniswayo, sinezinye ii -apps zeminye imiba, Smartify ikuvumela ukuba ugcine imifanekiso oyithandayo ukuze uyijonge kamva; Inga udale ingqokelela yakho yobuqu esebenza njengegalari ehambayo. Uyakwazi ukwabelana ngeegalari kunye nabasebenzisi abaninzi okanye ufumane abanye ukuba le app icebisa, ngokusekwe ngokuchanekileyo kubugcisa obugciniweyo.
Uhlelo lokusebenza ifumaneka simahla kwi-iPhone nakwi-Android ezivenkileni zabo. Ukuba ujonga isixhobo esikhulu ukutyelela iimyuziyam, kubalulekile ukuba unayo kwiselfowuni.
Zikhuphelele ukusuka apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Smartify yi «Shazam yoBugcisa» usetyenziso oluchaza imizobo evela kwiimyuziyam kwihlabathi liphela